Rzeczpospolita - पूर्वी युरोप मा सोह्रौं शताब्दीमा गठन भएको थियो जो राज्य। नयाँ शक्ति को संरचना समावेश लिथुआनिया को महान् Duchy आफ्नो मुलुकमा (साँचो लिथुनियन् र संलग्न) र पोल्याण्ड नै मुलुकमा संग। सम्म आक्रामक अष्ट्रो-हंगेरी र रूस राष्ट्रमंडल को जमीन साझेदारी गरे राज्य, दुई बारेमा शताब्दीयौंदेखि अस्तित्व। पहिलो राष्ट्रमंडल को खण्ड ठूलो देश, आफ्नो इतिहास को समय मा एक उज्ज्वल पृष्ठ थियो जो को अन्त सुरु।
यसरी, दुई देशहरूको विलय markedly को चौधौँ शताब्दीको अन्त देखि थियो। त्यसपछि, Teutonic आदेश होसियार गर्न, पोल्याण्ड र लिथुआनिया अस्थायी सैन्य-राजनीतिक शत्रु घृणा उत्पन्न सम्बन्ध सिर्जना गर्नुभएको छ। यो सम्बन्ध आधिकारिक Jagiello र लिथुनियन् पोल्का Jadwiga बीच mezhdinastiynym विवाह संग छाप थियो। सत्तारूढ राजकुल, intermarried यसरी एकताबद्ध र शक्ति। तर हामी थाह छ, त्यहाँ केही अस्थायी भन्दा बढी स्थायी छ, त्यसैले यो सैन्य-राजनीतिक सम्बन्ध लिथुआनियाई राजवंश पहिलो प्रतिनिधि को निर्देशन अन्तर्गत शान्तिमा अवस्थित जारी, र त्यसपछि - पोलिश। त्यसपछि, भन्दा बढि कर्ण मा वास्तव मा राज्य मा शक्ति हडपे गर्ने डंडे, उभिए।
यस्तो rapprochement डंडे र Lithuanians को जीवन को बाटो बन्द मदत गरे। दुई मानिसहरूका विश्वास उदाहरणका लागि मौलिक मतभेद, बावजुद सामान्य धेरै थिए। तर, बस एक सय वर्ष भन्दा बढी, संघ एकदम स्थिर छ।
राष्ट्रमंडल को औपचारिक शिक्षा 1569 मा, वर्ष सय एक मात्र र पचास भयो। यो सहमतिलाई दुवै पक्ष, जो संग बराबर अधिकार खोजे विशेष गरी Lithuanians advocated पोलिश आर्य। बारी मा, डंडे लामो लिथुआनिया को महान् Duchy थियो धेरै जो को युक्रेनी उर्वर भूमि, आफ्नो आँखा छन्।
Rzeczpospolita जो दुई देशहरू देखि प्रतिनिधिहरू भेला भएको Lublin Sejm, मा स्थापित भएको थियो। स्पष्ट रूपमा एक आहार मा डंडे Rzeczpospolita लिथुनियन् मुलुकका पूर्ण एकीकरण को विचार advocated। को Lithuanians को भाग मा एक equilateral संघ को निष्कर्षमा लागि प्रस्ताव सुनेका थिए। Lublin Sejm डंडे द्वारा धेरै insinuations द्वारा marred थियो। Lithuanians पनि स्थिति defuse र समय पाउनको लागि वार्ता छोड्न बाध्य भए। यी absences मध्ये पोल्याण्ड मनपरी यसको सदस्यता लगभग सबै युक्रेनी मुलुकका समावेश। स्वाभाविक, लिथुआनियाई पार्टी डंडे, Lithuanians त्यस्तो हरकतों छोड्न सक्ने एक पटक भन्दा त थप मा परस्पर लाभदायी सर्तहरू जिद्दी, बरु एकपक्षीय भन्दा कसरी पोल्याण्ड देखाए। जबकि यस्तो खिचलो जारी, र जारी गर्ने Livonian युद्ध, लिथुआनिया मा नकारात्मक प्रभाव पार्न जो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति Lithuanians आफ्नो अवस्था प्रदर्शनी अनुमति थिएन, त्यसैले केही समय उतार चढाव पछि लिथुनियन् पक्ष Lublin फर्के र कागजातमा उनको वस्तुहरू लागि अलोकप्रिय लिन सहमत भए। Rzeczpospolita - युरोप, नयाँ राज्य को नक्सामा अब देखि। सबै गणना मा, यो एक विशाल conciliation काम यो एक समझौता प्राप्त गर्न सम्भव थियो जो को पाठ्यक्रम गरेको थियो स्पष्ट भयो। पनि नजिक प्रत्येक अन्य संग सँगै दुवै देशहरूको आर्य।
यसको अस्तित्व समयमा Rzeczpospolita, युद्ध मा धेरै समय बिताए। Unconquered युक्रेनी Cossacks हदसम्म आफ्नो सेवाहरूबाट लाभ भन्दा बढी समस्या ल्याए। लगभग सबै आफ्नो अस्तित्व को Rzeczpospolita तिनीहरूलाई निरन्तर युद्ध छेडा। र युक्रेन र रूस को संघ पछि अर्को नयाँ प्रतिद्वन्द्वीको थपियो। रूसी शक्ति, युक्रेन पक्षमा डंडे विरुद्ध लडिरहेका यद्यपि, तथापि, सामान्य जमीन एक संयुक्त मिसन लागि पत्ता लगाउन। तसर्थ, युक्रेनी क्षेत्रमा Andrusovo सम्झौता द्वारा विभाजित भएको थियो। पोल्याण्ड सही बैंक नियन्त्रणमा नै रूसी Rzeczpospolita प्राप्त, तर भाग्य द्वारा र विभाजित हुनेछ र यसको अस्तित्व समाप्त हुनेछ।
"जाक-चूसनेवाला" छैन रूपमा सरल थियो वा Jacquerie के हो
हान Tokhtamysh: मास्को मा बोर्ड र मार्च
म विश्व युद्ध मा संयुक्त राज्य अमेरिका: ऐतिहासिक तथ्य
Tiananmen वर्ग, चीन मा 1989 घटना
रूपमा संसारमा कान्छो पोपको सबै झुक्काएका
रूस को पहिलो अध्यक्ष: जीवनी, इतिहास र बोर्ड को विशेषताहरु
सार्वजनिक प्रशासन - यो छ ...
घर मा तजबजार - जिगर रोग को रोकथाम
को ओठ मा कष्टप्रद चिसो - यसको सबै महिमा मा herpes
बाल (मात्रा लागि) को लागि उपाय: प्रकार र प्रयोग को तरिका
कलिथिस भनेको हो? Ulcerative colitis: लक्षण, उपचार
कति चाँडो कागज को पन्जा बनाउन?
मिन्स्क मा Chelyuskinites पार्क
लुगा धुने मेसिन "ARISTON": निवारण। लुगा धुने मेसिन "ARISTON": सम्भावित गल्तीलाई, आफ्नै हात मर्मत
पनीर सूप कसरी खाना पकाउनु: एक आनन्द - स्टोभ मा खडा?
आफ्नो हातमा एक ग्रीनहाउस कसरी बनाउने
"Nootropil": प्रयोगको लागि निर्देशन